काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘टीभीएस ग्राण्ड दशैं एक्सचेञ्ज मेला’ सुरु « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं । नेपालको लागि टीभीएस टू–ह्वीलर्सको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रालिले आजबाट ‘टीभीएस ग्राण्ड दशैं एक्सचेञ्ज मेला’को प्रारम्भ गरेको छ ।
भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिएको उक्त मेला आजको मितिबाट असोज ६ गतेसम्म ६ दिनका लागि आयोजना हुनेछ । यस एक्स्चेञ्ज मेलामा ग्राहकहरुले जुनसुकै कम्पनीको मोटरसाइकल वा स्कूटर ल्याएर त्यसको सट्टामा नयाँ मोटरसाइकल लिएर जानसक्नेछन् ।
यस एक्सचेन्ज मेला अन्तर्गत ग्राहकहरुले जुनसुकै कम्पनीको पुरानो मोटरसाइकल वा स्कुटरमा बजार मूल्य भन्दा थप रु. १०, ००० सम्म मुल्याङ्कन पाउने छन् ।
त्यस्तै ग्राहकहरुले नयाँ सवारी खरिद नगरी १ लाखसम्म र किनिसकेपछि रु.१०,००,००० सम्मको आकर्षक उपहार प्राप्त गर्न सक्नेछन् । जसको लागि नयाँ सवारी किन्न इच्छुक ग्राहकले टीभीएस डट कम÷दशैंमा जानु पर्ने हुन्छ ।
यसैगरी शून्य व्याजदरको विशेष सुविधाका कारण यो मेला किस्ताबन्दीमा सवारी किन्न चाहनेका लागि समेत उत्साहजनक रहेको बताइएको छ । यस अफरमा प्रि–बुकिङ् गरे मात्रपनि ग्राहकहरुको लागि रु. २,००० बराबरको आकर्षक उपहारको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
कम्पनीका अनुसार यस योजनाको मुख्य आकर्षणको केन्द्र भनेको एक्सचेन्जमा ईएमआई अफर रहेको छ, जहाँ ग्राहकले कुनै पनि कम्पनीको पुरानो मोटरसाइकल वा स्कुटर लिएर गएर त्यसको मुल्याङ्कन बराबरको रकम डाउन पेमेन्ट स्वरुप तिरेर बाँकी रकम ईएमआईको सुरुवाती दर रु.५,९९९ मासिक रुपमा तिरेर नयाँ मोटरसाइकल वा स्कुटर घर लैजान सक्नेछन् ।
यस अफरले पुरानो सवारीको सट्टा नयाँ सवारी घर लैजान ईएमआई र क्यास दुवैको माध्यमबाट विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । त्यसका साथै यस एक्सचेन्ज अफरमा टेस्ट राइड गरेमात्र पनि ग्राहकले पक्का–पक्की उपहार प्राप्त गर्ने छन् ।
यस दशैं ग्राण्ड एक्सचेन्ज मेलाको उद्घाटन शंकर ग्रुप तथा जगदम्बा मोटर्सका अध्यक्ष शाहिल अग्रवालले गरेका थिए, उनले उदटन गर्ने क्रममा भने, ‘टीभीएसले सँधैं नेपाली अटोमोबाइल प्रेमीको चाहना मध्यनजर गर्दै बजारमा नयाँ र नवीनतम प्रविधिका मोटरसाइकल तथा स्कुटर नेपालमा भित्र्याउने गरेको छ । नेपालीहरुको महान चाड बडादशैँको मुखमा आउन आँटेको यस एक्सचेन्ज मेलाले ग्राहकलाई नयाँ सवारीका साथ् बडादशैंमा थप खुसियाली प्रदान गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’